Tomatara taorian'ny fisafidianana: fomba fambolena mba hambolena, nahoana no mitoloko sy mihintsana ny zana-ketsa, inona no mitranga amin'ny voatabia raha tsy tanteraka ny dingana? - Zavamaniry mihinana - 2019
Sakafo ho an'ny voatetika tomombana aorian'ny fisafidianana, olana sy vahaolana
Raha miady amin'ny lohataona tanora noho ny zony ny faharatsian'ny tohodrano, dia efa maitso mavomavo ny toeram-pivarotan'ny zaridaina amin'ny jiro tanora.
Ny fanangonana ny tendron-tsoroka dia voasariky ny hazavana, ny vilany, ny tany, ny zezika dia voaomana. Ahead - pick. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka ny hiteny amin'ny fomba tsotra sy amin'ny antsipirihany mikasika ny fomba fiasan'io fomba fiasa io isika.
Hianatra ny fomba hikarakarana voatabia voatabia ianao aorian'ny fisafidianana, inona ny olana mety hitranga aminao ary, mazava ho azy, ny fomba hamahana azy ireo.
Fitomboan'ny toe-pahasalamana sy fikarakarana aorian'ny fambolena
Hazo na avo lenta, drafts
Tany tsy mety
Tsy fahampian'ny fahazavana
Nahoana no tsy mitombo?
Tany tsy voaomana
Inona no anton'izany?
Tany tsy mifandanja
Inona no mitranga amin'ny saplings aorian'ny fisakafoanana?
Mba hamaliana ity fanontaniana ity ary hahafantaranao ny karazana fikarakarana toy izany, andeha hofaritana hoe inona no fiomanana?
vaovao. Ny famolavolana zana-ketsa avy amin'ny fitahirizana mahazatra ao anaty tavoahangy manokana na avy amin'ny container kely ho an'ny lehibe iray dia antsoina hoe pick.
Araka ny voalazan'ny mpamboly dia manatsara ny fototeny ny fisakafoanana. Aorian'ny fikarakarana mahomby dia tomombana ny voatabiha, fa voatsindry mafy. Ny sasany amin'izy ireo amin'ny toerana vaovao dia mety tsy hiorim-paka. Ny jiro dia manana rafitra fakan-drivotra malemy, ary tokony hatao tsara ny fisavana. Ny fahasimbana eo amin'ny fakany dia miteraka fahafatesan'ny tovolahy.
Noho izany, ny fotoana tokony hambolena amin'ny tany dia tokony hampiasaina hanamafisana ny tsy fahampian'ny zana-ketsa, hanome azy ireo hery hivoatra sy hanatanterahana fepetra fisorohana amin'ny aretina amin'ny kolontsaina voatabia.
Vantany vao nomanina, dia mila rano ny zana-ketsa., ka ny tany dia mihodidina ny fakany, ary manala ireo zana-ketsa ao amin'ny toerana mahatsiravina mandritra ny roa na telo andro. Ity no vanim-potoanan'ny famolavolan-tena ho an'ny toerana vaovao.
Ny fitaovana ilaina amin'ny fambolena tomatra dia ny manaja ny faharetan'ny mari-pana sy ny fahazavana, ara-potoana sy ampy, famokarana ary famenoana.
Ny hafanana tsara indrindra ho an'ny zana-ketsa dia 16 - 18 ° C mandritra ny andro; Amin'ny alina 14 - 15 ° C.
Ny fahazavana dia tsara indrindra amin'ny phytolampana, indrindra mandritra ny fotoam-pahoriana. Ny andro mazava amin'ny zana-ketsa dia tokony maharitra 12-14 ora. Ny jiro dia tokony ho ambony noho ny fanamafisana ny ketsa rehetra. Mba hisakanana ny zana-ketsa tsy havoaka amin'ny jiro, dia ilaina ny maneho ny lafiny samihafa amin'ny zana-ketsa eny amin'ny masoandro.
Voatery mamelona intrigo in-telo izy io:
Ny voalohany dia tsy aloha kokoa noho ny amin'ny herinandro - roa aorian'ny fisafidianana. Raha voaomana tsy miankina ny tany, dia alefa amin'ny lavenona. Raha nafindra tany amin'ny tany namboarina namboarina ireo zana-ketsa, dia atolotra voalohany amin'ny microelements aloha izany. Mandritra io vanim-potoana io dia manomboka maniry betsaka ny ravina ny zana-ketsa, ary mila sakafo fanampiny izy ireo amin'ny nitroka sy ny phosphorus (Superphosphate). Raha lava ny tifitra, dia tokony hesorina ny nitroka.
Ny famatsiana faharoa dia vita amin'ny tapa-bolana avy amin'ireo zavamaniry ara-boajanahary voalohany (compost, humates, dihin-kesika, dihin'ny omby).
Ny fiakarana fahatelo dia vita tapa-bolana alohan'ny hambolena amin'ny tany malalaka na trano fandroana misy alika mineraly. Tokony ho raisina amin'ny potasy ny fiheverana, ka mahatonga ny ovain'ny voninkazo.
Ho an'ny tanjona fisorohana, dia azonao atao ny manondraka ny zana-ketsa tsy amin'ny rano tsotra, fa amin'ny vahaolana malemy vaky. Misy teôlôjiana kely iray miendrika menaka be dia be. Vita roa litatra ny habeny. Afaka mifantoka mandritra ny fotoana maharitra io fifantohana io. Ho an'ny fitotoan-drano voatoto 100 litatra mivoatra ao anaty rano iray litatra, ary ampiasaina ho an'ny fampiasana tokana.
Ny famenoana ny zavamaniry dia vita rehefa avy nodiovina tapa-bolana talohan'ny nandefasana ny tany. Ny zana-ketsa dia napetraka aloha eo amin'ny fitaratra, izay mahazatra kokoa ny roa degre. Andro vitsivitsy taty aoriana dia sokafy ny trano lafaoro. Ary amin'ny dingana fahatelo dia alainy eny amin'ny balkon aloha mandritra ny 2-3 ora ary avy eo mandritra ny andro manontolo.
Azonao atao ny mijery lahatsary iray momba ny fomba fikarakarana ny zana-ketsa rehefa mifidy:
Tena zava-dehibe. Ny aretina ateraky ny zana-ketsa dia manana antony roa fototra: ny fikojakojana sy ny fikarakarana tsy mety, ary koa ny tsy fahampian'ny tany.
Ny bibikely sy bakteria izay miteraka aretina voatabia, dia mety efa rakofana ao anaty tany, na maka amin'ny zana-kazo avy amin'ny zavamaniry indostrialy hafa.
Koa satria manangona zavamaniry ho an'ny alahelo, avy eo Ny ravinkazo kely voadaroka ao anatin'ny roa andro dia hahazo ny endriny voalohany. Amin'izao fotoana izao, afaka alefa miaraka amin'ny vahaolana matanjaka kokoa izy ireo ary mitondra ny tsirin-tsakafo Epin.
Tomaty - kolontsaina thermophilika. Noho izany dia tena mahatsapa ny fiovan'ny hafanana. Ny mari-pahaizana mety tsara dia 18 ° C mandritra ny andro ary vitsy kely ambany kokoa amin'ny alina. Ny Seedlings dia mihodina mivantana eo akaikin'ny varavarankelin'ny varavarankely, izay mihamitombo hatrany hatrany.
Ny tomaty dia tsy mandefitra fanodinana, Noho izany mialoha ny fametrahana ny zana-ketsa eo amin'ny varavarankely, dia feheziny ny banga rehetra eo amin'ny sary. Raha malazo sy mihosin-dra ny raviny, dia manondro fa ny tazo dia nipoitra tsikelikely. Ny fakany, amin'ny toerana voafetra, dia tsy afaka mamelona ny ravina rehetra amin'ny hafanana. Ary rehefa mafana ny faka, dia tsy maka ireo singa mpandindona avy amin'ny tany intsony ireo fakany.
Raha lasa moka sy mavo ny ravina zana-ketsa, ary mitombo ny vinaingitra, dia tsy misy azony ilay zavamaniry. Tsy voatery ny hiara-misakafo amin'ny iray azôty mba hisakanana ny voanjo tsy hivoaka. Ny sakafo dia tokony ho karazana mineraly feno. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia mitondra any amin'ny fototry ny fotony sy ny fambolena amin'ny tany. Manakana ny fidiran'ny oksizenina amin'ny fakany izany. Ilaina ny manaisotra ny crust natsangana ary mandatsaka vahaolana manala baraka.
Amin'ny hazavana ambany, dia mitsahatra ny photosynthesis.. Mipoitra ny fotony ary mihodina mavo. Ilaina ny mandamina ireo zavamaniry mba hampitombo ny fahafahana miditra amin'ny karazan-jazakely tsirairay, ary hampiakatra biriky fanampiny.
Ny fivoatry ny hazavana dia mahatonga ny ravina handoro, manodina sy manongana. Ny fidirana amin'ireo sakafo avy amin'ny tany dia miseho ao anaty haizina. Noho izany, tokony tokony hanitsy ny maodely ianao.
Ny zana-ketsa mamakivaky ny mari-pana amin'ny ambany sy ambany dia miteraka aretina toy ny rot. Tsy voavonjy ny voan'ny aretina. Ny ravina dia mihodina mavo sy mianjera, ny zana-ketsa ary mihintsana. Ilaina haingana haingana ny fambolena voajanahary ho an'ny tany vaovao.. Alohan'ny famindrana, alaivo ny fototarazo miaraka amin'ny permanganate potassium.
Ny efitry ny tany ety ivelany dia mitondra mankany amin'ny fako ihany koa.
Tena zava-dehibe. Ny fametrahana ny zana-ketsa dia tokony ho betsaka, saingy mahalana, manalavitra ny fidirana amin'ny rano eo amin'ny ravina.
Tokony hitoetra ao anaty ny tany, ary tokony ho maina ny maina. ihany koa Ilaina ny manamarina raha voasakana ny fisian'ny lavaka.
Raha tsy nofaranana talohan'ny nisafidianana ny tany, dia ny fusarium no antony mahatonga ny vozona - aretina manasitrana izay misy fiantraikany amin'ny rafi-pandehan'ny zavamaniry.
Ny ravina ambany dia mavo, avy eo ny voany manontolo. Raha tsy mavomavo tanteraka ilay zavamaniry, dia nafindra any amin'ny tany maloto izy io.. Raha manontolo, dia esorina izy mba tsy hanindry ny sisa amin'ireo zana-ketsa.
Io no iray amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny tsimokaretina voatabia. Ny fahavoazana amin'ny fotodrafitrasa misy ny fambolena mandritra ny famindrana, ny fijanonan'ny fakany na ny fieboany, ary koa ny fisehon'ny fihoana rivotra manodidina ny fakany dia manakana ny fototry ny fototarazo tsy hiorim-paka sy mivoatra amin'ny toerana vaovao. Miangavy ny mamelona ny fitomboany.
Ny tany matevina dia miteraka fikirizana. Ny famokarana dia tokony haverina ho tany malalaka. Ny tsy fisian'ny singa toy ny tsiranoka toy ny vy dia mampiato ny fivoaran'ny zana-ketsa. Ny fangalana aina amin'ny microelements dia ilaina.
Amin'ny voalohany, ny hafanana ambany amin'ny tany dia tsy mamela sakafo avy amin'ny tany, izay mitarika amin'ny fisamborana.
Spider mite, niparitaka avy amin'ny zavamaniry indostrialy hafa, dia afaka mampiadana ny fitomboan'ny zavamaniry. Mba hiadiana amin'izany, mitandro ny zavamaniry amin'ny karbofos, aktellik ary fitoverm.
Ny root na ny rotaka dia hampitsahatra ny fitomboan'ny zana-ketsa, raha toa ka tsy novana tamin'ny fotoana ny zavamaniry, dia manondrahana ny fototra niavian'ny zavamaniry amin'ny vahaolana manganese.
Ho an'ny olana rehetra, ny aretina voatabia, ary koa amin'ny tanjona fisorohana, dia mampiasa vahaolana ho an'ny fambolena.
Ny tsy fahampian'ny hazavana amin'ny toetry ny famolavolan'ny zana-ketsa, sy ny jiro tsy mitongilana (eo amin'ny lafiny iray ihany) dia mitarika ho amin'ny zavamaniry hitadiavana hazavana, dia hanomboka hitsahatra. Mihamangatsiaka ny tahony ary mihintsana eo ambanin'ny lanjan'ny ravina ny zana-ketsa. Ilaina ny mamehy ny fomba fanao amin'ny hazavana ary mandamina ny zavamaniry.. Azo atao koa ny mametraka ireo saribakoly eo anoloan'ny varavarankely.
Ireo zavamaniry izay tratran'ny azota dia manome fitomboan'ny tampon-doha, ary tena misintona izany.
Ny aretina matetika avy amin'ny voatabia voatabia - ny mainty hoditra. Manomboka mihodina ny mainty, matevina, maty ny zavamaniry ary maty.
Caution! Ny aretina dia haingana, afaka mamono ny zana-ketsa rehetra ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny zavamaniry voan'ny aretina dia nesorina avy hatrany. Ny tany dia feno rano volo solon'ny alika Mangatsiaka, Fitosporin, Alirin. Aorian'izany, tsy mila rano ny voatabiha mandritra ny herinandro, tokony ho maina ny tany.
Araka ny hitanao, ny fiomanana tsara sy ny fikarakarana marina atao dia hamonjy anao ny hery sy ny hery ary ny fotoananao amin'ny hoavy ary ny fahafinaretana amin'ny fanangonana ny vokatry ny asanao. Ny fepetra fampiharana dia hanampy amin'ny fitsaboana aretina sy fahafatesan'ny zana-ketsa. Tandremo ny fitaovana voa. Io no kalitao avo indrindra amin'ny voa izay fiantohana ny fijinjana be!
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Sakafo ho an'ny voatetika tomombana aorian'ny fisafidianana, olana sy vahaolana